» नेकपा नेता बिष्णु रिजालको टिप्पणी : यसकारण माधब नेपालको बिरोध
२०७५ आश्विन १५,सोमबार १६:१७
दशैं–तिहारका बेला बम्पर उपहारका अनेक कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन् । अहिले चाहिँ पार्टीमा त्यस्तै बम्पर खुलेको छः माधव नेपालको सके जति विरोध गर्नुहोस्, नम्बर बढाउनुसहोस् । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर, सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर, बुस्ट गर्ने गरी लेख लेखेर– जुन हिसावले सकिन्छ, त्यही हिसाबले सत्तोसराप गर्दा हुन्छ ।
यसो गर्दा पार्टीमा पद प्राप्त व्यक्ति छ भने त्यस पदका लागि उसको खास योग्यता झल्किन्छ, पार्टी एकता भइरहेको यस चरणमा कुनै पार्टी वा जनवर्गीय संगठनमा इच्छा लागेको पद पाउन सकिन्छ, सरकारी नियुक्तिका लागि ब्याकुल छ भने उसको उचित मूल्यांकन हुन्छ । जागिर धरापमा पर्छ कि भनेर चिन्ता गर्दै अरुको पतनको दिउँसै सपना देख्ने साथीहरुलाई चेतना भए हुन्छ, तिनको व्यक्तित्व बन्नमा पनि कुनै न कुनै रुपमा माधव नेपालकै योगदान छ होला । हिजो केपी ओली कमजोर हुँदा ती कहाँ थिए ? तिनले बोल्ने भाषा कस्तो थियो ? जनकपुर महाधिवेशन ताका, बुटवल महाधिवेशन ताका र त्यसपछि माधव नेपाल सत्तामा हुँदा तिनको के हालत थियो ? ती माधव नेपालका वरिपरि कसरी परिक्रमा गर्दथे ? हिसाव–किताव अरुले पनि राखेका होलान् ।
जहाँसम्म माधव नेपालले सरकारको विरोध गरे भन्ने चर्चा छ, त्यसमा दम छैन । सरकारले अझै राम्रो काम गरोस्, हामीले नसके कसैले सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प छैन भनेर संसद्मा बोलेको कुरालाई विषयान्तर गर्दै जीविका चलाउनेहरुलाई धेरै भन्नु केही छैन । तर, बानेश्वर चोकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई सोध्दा हुन्छ– सरकारका बारेमा आम मानिसहरुको के धारणा छ ? पक्कै पनि सरकारमा पदमा बस्नेहरुलाई जताततै राम्रो लाग्छ । तर, वास्तविकता यति मात्र होइन नै भन्दा यत्रो हमला ? के त्यसो भए माधव नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्ति एकदम राम्रो छ भनेर नारा लगाउनुपथ्र्यो ? के पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली अनि बायुसेवा निगममा झापाका मदन खरेल, भारतका लागि राजदूतमा निलकण्ठ उप्रेतीहरुको नियुक्तिका पक्षमा आरती उतार्नुपथ्र्यो ? जनताको अपेक्षा र पार्टीको घोषणापत्र लत्याउँदै ल्याइएको बजेटका पक्षमा नाराबाजी गर्नुपथ्र्यो ?
अहिले कसैले सरकारको विकल्प खोजेको छैन । चार बुँदे सहमति अनुसार केपी ओलीलाई अझै दुई वर्ष सरकार चलाउने सुविधा छ भन्ने कुरा माधव नेपाललाई पनि थाहा छ । आक्रमणलाई तेज पार्न, पार्टीमा एकलौटी गर्न र आफ्नो अयोग्यताहरुलाई ढाकछोप गर्न अरुलाई हेपेर जति नै अन्तर्वार्ता दिए पनि, नांगै मैदानमा उतारे पनि सत्य छोपिँदैन ।
हामी पार्टी एकताको चरणमा छौँ । यतिबेला विवाद बढाएर कसैलाई फाइदा छैन । तर, पार्टीका जिम्मेवार तहमा बसेका नेताहरुलै मर्यादा नाघेर मैदानमा उत्रिएपछि प्रस्ट भए हुन्छ, प्रतिवाद पनि त्यही तहकै हुन्छ । किनभने, हाम्रो पार्टीको विधानमै लेखिएको छ, ‘पार्टीका सबै सदस्य समान छन् ।’
फेरि पनि नेताहरुबीच यतिबेला अझ बढी सुझबुझ र सहमति आवश्यक छ । विधि बन्नै बाँकी छ, नेतृत्वका बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ । हिजो विहान मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सिंगापुरबाट फोन गरेर माधव कमरेडसँग ठीकै कुरा गर्नुभएको छ । हुन त यसरी पार्टीभित्रकै नेताहरुबीच कुरा हुँदा पनि सत्ताका ध्रृतराष्ट्रहरुले ‘आफ्ना’ का विरुद्ध ‘पराइसँग सल्लाह गरेकाले’ उनीहरुको ‘पतन हुने’ आरोप लगाउन बाँकी राख्दैनन् । तर पनि, परिस्थिति सम्हालेर एकतालाई जोगाउनैपर्छ, कार्यकर्ताको स्वाभिमानलाई उँचो पार्नैपर्छ ।
रिजालले फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेको धारणा
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधन ( हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्ण पाठ)